Archive du 20200422
Ady amin'ny Coronavirus “Omena tambiny manokana ireo mpitsabo”
Nihazo an’i Fianarantsoa i Andry Rajoelina Filoham-pirenena omaly talata. Isaorako manokana ireto mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana eto hopitalin'Andrainjato,
Antoko Otrikafo “Mamotika ny IMRA ny fitondrana raha mihemotra eo’’
Izahay eto anivon’ny antoko politika Otrikafo, hoy ny sekretera jeneraliny, dia efa ela no niresaka manana tombony betsaka isika amin’ny fananana ireo ravinkazo na raokandro azo hitsaboana ireo aretina misy eto Madagasikara.
Antoko Fanorolahy Tokony hajoro ny mandatehezana eny ifotony
Mbola miaina anaty krizy tanteraka isika eto Madagasikara ankehitriny vokatry ny fisian’ilay tsimokaretina coronavirus ka tsy maintsy hiainana ilay hamehana ara-pahasalamana izay miteraka ny fihibohana.
Fitsinjaram-pahefana Fotoana izao hanampiharana azy...
Noho ny fametrahana ny fahamehana ara-pahasalamana teto amin` ny firenena dia afaka mihetsika ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Nampandraisina andraikitra ny fiarahamonina amin`ny alalan` ny Loharano.
Fiarovana an’i Arphine Niala an-daharana ry Maitre Olala
Raha vao niseho iny raharaha iny, dia niantso anay Atoa Gérard Rakotonirina Filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety na ny OJM satria izay no fanao rehefa misy mpanao gazety lasibatra.
TENCE MENA Afaka tanteraka tamin’ ny toaka
Anisan’ireo olona tsy dia nahatsapa loatra izany hasambarana anaty sy ny vokatra tsara entin’ny legioma amin’ny vatana izany i Tence Mena.
Fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety Ratsy toerana i Madagasikara
Tsy mihetsika eo amin’ny laharana faha-54 amin’ny 180 i Madagasikara amin’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety,
Polisim-pirenena Manentana mialohan’ny hanasaziana
Mba hisorohana ny fiparitahan’ny valan’aretina COVID-19 sy ho fampiharana ny fepetra fanaovana aro tava dia manohy ny fanentanana eny anivon’ny faritra ny avy eo anivon’ny polisim-pirenena. Anjaran’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano
Taratasy voarain'ny Filoha Avy any Frantsa kay !
Ny 8 aprily no nilaza ny Filoha Malagasy Andry Rajoelina fa nisy ny taratasy voarainy ny 24 martsa maneho fa manana fanefitra hahafana mandresy ny coronavirus i Madagasikara.
Fampodiana ireo Frantsay sy Eoropeana Fiaramanidina roa no ho tonga eny Ivato
Fiaramanidina miisa roa be izao no haka ireo teratany Frantsay sy Eoropeana eto Madagasikara ato ao anatin’ny roa andro.
Serasera Mila mifandraika amin’ny zava-misy
Antony iray tsy nampahomby ny fihibohana dia ny sersera. Niompana tamin` ny fampitoniana ny olona ary ny filazana fa tsisy ahiana fa voafehy tanteraka ny zava-misy ny serasera ataon’ny mpitondra hatramin` izao.
Baolina kitra Italiana Nofaranana tanteraka ny taom-pilalaovana 2019 - 2020
Tsy mifanara-kevitra be ihany ireo mpitantana lalao baolina kitra any Italia ny amin'ny tokony hanohizana ny fiadiana ny ho tompon-daka any an-toerana.
Famendrahana ranom-panafody Taxi-be 160 isa no nenjehina omaly ho an’Itaosy
Mafy ny tsy nidiram-bola tao anatin’ny iray volana ho an’ireo tompona taxi-be, indrindra fa ireo mpamily sy ny mpanampy azy noho ny hamehana ara-pahasalamana.
Fampianarana Hanomboka anio alarobia manerana ny nosy.
Araka ny nambaran'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ny alahady 14 aprily lasa teo dia hanomboka anio alarobia 22 aprily manerana ny nosy ny fampianarana.Ireo mpianatra hanala ny fanadinam-panjakana Bepc sy Baccalaureat no hanomboka .
Hopitaly HJRA Tsy miova ny tahan’ireo olona tonga manatona azy
Tsy niova ny isan’ny olona tonga nanatona ny hopitalim-panjakana HJRA etsy Ampefiloha na dia eo aza ny fisian’ny tsimok’aretina coronavirus na ny COVID 19 .
Me Jhonny eny Mahitsy Mitsabo aretin'ny voa ny fanafody natoraly
Tsy dia marina loatra ny filazana fa mitarika aretin'ny voa ny fisotroana tambavy, hoy i Me Jhonny mpitsabo nentim-paharazany eny Mahitsy Lalam-pirenena faha-4.
Famoahana entana an-tsokosoko Lehilahy roa voasambotra teny Ambohimanarina
Voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP6 Ambohimanarina teny amin’ny amin’ny faritra misy ny art Malagasy rehefa avy namoaka sy nitatitra an-tsokosoko ny entan’ny mpampiasa azy teny Ambohibao ny talata 21 aprily teo ny lehilahy iray.
Fianarantsoa Tratra ireo saika hanaparitaka19,8 tapitrisa ar sandoka
Vola sandoka 20 000 Ar marobe, mitentina 19 800 000 Ar no saika haparitaka lehilahy miisa telo tao an-tampon- tanàn'i Fianarantsoa.
Halatra ireo fanampiana teny Andoharanofotsy Tompon’andraikitry ny BNGRC no atidoha ?
Tamin’ny herinandro lasa iny no nahatrarana ireo entana fanampiana an-taoniny vitsivitsy tokony hozaraina, saingy nisy nanodinkodina, ka hita teny Andoharanofotsy.
Notereny ho malemy ny zanany Nahazo fahafahana vonjimaika ilay ramatoa
Nahazo fahafahana vonjimaika ilay ramatoa iray 30 taona nanao fitaovana ny zanany tsy manan-tsiny mba hahazoany vola rehefa nentina teny amin’ny Fitsarana ny alatsinainy teo.
Vidin-tsolika midina Tsy mbola hita taratra eto Madagasikara aloha
Raha ny vidin’ny solintany eo amin’ny sehatra iraisampirenena dia efa latsaky ny 2 dolara amin’izao fotoana izao ny barila.
Mpisehatra amin’ny kanto Vatsy hatramin’ny 1000 no hozaraina
Nizara fanampiana ho an'ireo artista Malagasy avy amin'ny lafi-kanto samihafa ny teo anivon'ny Minisiteran'ny Serasera sy ny Kolontsaina omaly.
Fiahiana ara-tsosialy ho an'ny mpamily sy resevera Miara miasa ny CNaPS, UCTS ary ny TEC Company
Tontosa omaly tetsy amin’ny CNaPS Ampefiloha ny sonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny CNaPS sy ny UCTS ary ny TEC Company ny amin’ny fametrahana GPS ireo fiara
Fisorohana ny coronavirus Mila arahi-maso ny any anaty tanàna.
Mila arahi-maso ny any anaty tanàna raha tena hiady amin'ity aretina tsy hita maso ity fa tsy sodokan'ny hita maso amin'ny arabe dia lazaina fa milamina.
Fisian’ny coronavirus Lasa mikorontan-tsaina ny Malagasy
Efatra ireo aretina tsy mifindra tena manamarika ny Malagasy, dia ny homamiadana ka lohalaharana amin’izany ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza sy ny nony izay 3,90%
Académie de Médecine Velon’ahiahy amin’ilay COVID Organics
Nanambara ny alatsinainy hariva teo ny avy eo anivon’ny Akademiam-pirenena Malagasy misahana ny fitsaboana eto Madagasikara na ANAMEM fa velon’ahiahy izy ireo manoloana ny fikasana hizara fanafody tambavy hiadiana amin’ny viriosy COVID 19 izao.
Coronavirus Tsy nisy tranga vaovao tao anatin’ny telo andro
Toy ny tamin’ny alahady sy alatsinainy teo, dia tsy nisy ny tranga vaovao nahatiliana ny tsimokaretina coronavirus omaly talata ka mijanona ho 121
Fiatrehana ny coronavirus Nanome 2,5 tapitrisa dolara ny Amerikanina
Nanambara fa manohana an’i Madagasikara amin’ny fiatrehana ny coronavirus i Etazonia, ka 2,5 tapitrisa dolara no haompana amin’izany,
Pr Sammy Gregoire Ravelonirina Mankasitraka ny vokatra COVID Organics
Niarahaba ny mpitsabo sy mpikaroka Malagasy ny Pr Sammy Gregoire Ravelonirina, filohan’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka eto Antananarivo na SECES Tana.